သင့်ရဲ့ ဗိုက်ကအရမ်းဆာလာတိုင်းမစားပါနဲ့ ..... ⋆ The Ginger Media
သက်ရှိတွေရဲ့အစ ဟိုး in the begining ကတည်းက အစားစားတယ်ဆိုတာ ရှင်သန်ခြင်းရဲ့ အလွန် ရိုးရှင်းတဲ့ နှစ်လိုဖွယ်တစ်ခုပါ… ။ ခုလို ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေမယ့် အဝလွန်ဖို့လွယ်ကူစေမယ့် အစားအသောက်တွေကို
ဖောဖောသီသီ စားသောက်နေတဲ့ခေတ်မှာ အစားအသောက်ဟာ ရန်သူလို ဖြစ်လာပြီ။ တကယ်တော့ အစားဟာ စိတ်ကိုရွှင်မြူးစေတဲ့ ခွန်အားကိုဖြစ်စေတဲ့ တကယ့်ရင်းမြစ်တစ်ခုပါနော်။
အစားစားချင်တယ် ဆိုတာ ကျန်းမာတဲ့ လက္ခဏာလည်း ဖြစ်တယ်နော်။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက မဆာပဲလည်း စားနေတာပါပဲ။ ပညာရှိသူတော်စင်ကြီးတစ်ပါးကို လူတစ်ယောက်က မေးတယ် .. သင့်ရဲ့ ကျင့်စဉ်ဟာ ဘာလဲ တဲ့.. ။
သူတော်စင်ကြီးက ပြန်ဖြေတယ်။ ငါဟာ ဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်မှာ အစားစားတယ်။ ရေငတ်တဲ့အချိန်မှာ ရေသောက်တယ်။ ပင်ပန်းလို့အိပ်ချင်လာတဲ့အခာ ငါအိပ်ပါတယ် တဲ့.. ။
ဟင်…ဒါဟာ သူတော်စင်တစ်ယောက်ရဲ့ ကျင့်စဉ်လား . သူမှ လုပ်နိုင်တာကျနေတာပဲ . ငါလည်းအဲလိုပါပဲလို့ တွေးလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။ သတိထားကြည့်ပါနော်။
တစ်နေ့တစ်နေ့ ဗိုက်မဆာပဲ စားနေတဲ့အကြိမ် ဘယ်နှကြိမ်ရှိလဲ? ရေမငတ်ပဲ ရေရောတခြားဟာတွေရော သောက်နေတာ ဘယ်နှကြိမ်ရှိလဲ . မအိပ်ချင်ပဲနဲ့ သွားလှဲအိပ်နေတာရော ဘယ်လောက်များလဲလို့ ။
အဲဒီအခါကျမှ သိလိမ့်မယ်။ ဥာဏ်ပညာကြီးတဲ့သူတွေဟာ ဘာလို့ သူတို့ ဥာဏ်ပညာကြီးကြတာလဲ ဆိုတာနော်။ အဲဒီတော့ ဗိုက်ဆာတာကို fight ရမှာလား။ မဟုတ်ပါဘူး။ Don’t fight your hunger. နော်။ ကိုယ် ဗိုက်ဆာတာကို လေးလေးစားစား သဘောထားပါ။
အရင်ဆုံး ဗိုက်ဆာသလိုလို ဖြစ်လာရင် အစားတန်းမစားပါနဲ့ ရေတစ်ခွက်ဝဝ သောက်ပါ။ တစ်ခါတလေ ဗိုက်ဆာတာမဟုတ်ဘူး ရေငတ်နေတာ။ ရေငတ်တာနဲ့ ဗိုက်ဆာတာကို brain က signal မှား ရတတ်တယ်။
ရေသောက်ပြီးရင် သတိထားကြည့် နေလို့ အရမ်းကောင်းသွားတယ်။ တော်တော်နဲ့ ဗိုက်မဆာတော့ဘူး။ နောက်တစ်ခေါက် ဗိုက်ဆာရင် နောက်တစ်ခါ ရေအဝသောက်ကြည့်၊ လူက ပေါ့ပါးပြီး စောစောကထက် နေလို့ပိုကာင်းသွားပြန်တာ တွေ့လိမ့်မယ်။
သုံးခါလောက် အဲလိုလုပ်ပြီးမှ အစားစားဖို့ လုပ်ပါနော်။ စားတော့မယ်ဆိုလည်း ဗိုက်ဆာလို့ဆိုပြီး မသင့်တာတွေ တဝတပြဲ စားပစ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ တကယ် အာဟာရဖြစ်မယ့် အစားကို ဥာဏ်နဲ့ ရွေးပါ။
ပါးစပ်ထဲရောက် တန်း မြိုချပစ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့ အာရုံခံတွေကို အပြည့်အဝ အသုံးချပါ။ မျက်စိက သူ့ကိုမြင်ရတဲ့အခါ ခံစားမှု ၊ နှာခေါင်းကရတဲ့ သူ့အနံ့၊ သူ့ကိုဝါးလိုက်တဲ့အခါ ခံတွင်းထဲမှာ သူကျေညက်သွားပုံလေး .. အားလုံးကို သတိလေးနဲ့ သိပြီး တစ်လုပ်ခြင်း မျိုချပါ။
ဗိုက်ထဲအစားရောက်သွားတဲ့အခါ nutrious food ကို ရရင် အစာအိမ်က ပျော်တယ်နော်။ သတိထားကြည့်။ ခဏနေတော့ စားနေရင်းနဲ့ ဗိုက်ဝတဲ့ခံစားမှု ရလာပြီ..။ အဲဒီအခါ ရပြီ တော်လောက်ပြီ လို့ အစာအိမ်က ပြောတယ်နော်။ သူပြောတာကို နားထောင်ပါ.. ။
အဲလို လုပ်သွားရင် တဖြေးဖြေး sensitive ဖြစ်တာ အားကောင်းလာပြီးတော့ ကိုယ့်ခန္ဓာနဲ့ harmony ဖြစ်အောင် ညီညွတ်အောင် နေတတ်တဲ့ အသိပညာ ဥာဏ်ပညာ တဖြေးဖြေး ဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတာ သိလာလိမ့်မယ်။
အဲဒီအခါ စိတ်ထဲမှာ ငါ ခုမှ Really Whole ဖြစ်တယ်ပါလား.. ခုမှ ငါ့စိတ်အာရုံရော ငါ့ခန္ဓာရော connection ရသွားတာပါလား.. ခုမှ စိတ်နဲ့ခန္ဓာ တပေါင်းတစည်းတည်း ဖြစ်တာပါလားလို့ သိသွားလိမ့်မယ်။
အဲလို ဖြစ်လာပြီဆိုရင် weight ချရတာ အရမ်းလွယ်ပြီ။ ကိုယ့်ခန္ဓာက ပြောလိမ့်မယ် ဘယ်အချိန်မှာ အစားစား၊ ဘယ်အချိန်မှာ ရေသောက် ၊ ဘယ်ဟာစား ဘယ်ဟာမစားနဲ့ ၊ ရပ်တော့ စသဖြင့်နော် လုပ်တတ်လာလိမ့်မယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ဝိတ်ချရမလဲဆိုတာ ကိုယ့်ခန္ဓာကို မေးလို့ ရသွားပြီ။ ကိုယ့်အတွက်ဆို ဘယ်လောက်ဝိတ်ဆို သင့်ပါပြီ သူသိတယ်။ သူများတွေက ကြည့်ရင် နည်းနည်း ဝသေးတယ် ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေမယ် ။
ဒါ သူတို့အကြိုက်လို့ ထားလိုက်ပါနော်။ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ့်ခန္ဓာက ပြောတဲ့ perfect weight ကိုသာလိုက်နာဖို့ပဲ နော်။ ဗိုက်ဆာတိုင်း မစားပါနဲ့။ ဗိုက်ဆာရင် ရေသောက်ပါ။ ကိုယ့်ခန္ဓာနဲ့ connection ရအောင်လုပ်ပါ။
စိတ်နဲ့ ခန္ဓာ connection ရသွားတဲ့ အတွေ့အကြုံဟာ တခြား ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အရေးကြီးတဲ့အရာမှန်သမျှအပေါ် ဘယ်လောက်သက်ရောက်မှု အားကြီးကြီးနဲ့ အကျိုးပြုမလဲ ဆိုတာ ကိုယ်တွေ့သိရပါလိမ့်မယ်။
သကျရှိတှရေဲ့အစ ဟိုး in the begining ကတညျးက အစားစားတယျဆိုတာ ရှငျသနျခွငျးရဲ့ အလှနျ ရိုးရှငျးတဲ့ နှဈလိုဖှယျတဈခုပါ… ။ ခုလို ကနျြးမာရေးထိခိုကျစမေယျ့ အဝလှနျဖို့လှယျကူစမေယျ့ အစားအသောကျတှကေို
ဖောဖောသီသီ စားသောကျနတေဲ့ခတျေမှာ အစားအသောကျဟာ ရနျသူလို ဖွဈလာပွီ။ တကယျတော့ အစားဟာ စိတျကိုရှငျမွူးစတေဲ့ ခှနျအားကိုဖွဈစတေဲ့ တကယျ့ရငျးမွဈတဈခုပါနျော။
အစားစားခငျြတယျ ဆိုတာ ကနျြးမာတဲ့ လက်ခဏာလညျး ဖွဈတယျနျော။ ဒါပမေယျ့ ခကျတာက မဆာပဲလညျး စားနတောပါပဲ။ ပညာရှိသူတျောစငျကွီးတဈပါးကို လူတဈယောကျက မေးတယျ .. သငျ့ရဲ့ ကငျြ့စဉျဟာ ဘာလဲ တဲ့.. ။
သူတျောစငျကွီးက ပွနျဖွတေယျ။ ငါဟာ ဗိုကျဆာတဲ့အခြိနျမှာ အစားစားတယျ။ ရငေတျတဲ့အခြိနျမှာ ရသေောကျတယျ။ ပငျပနျးလို့အိပျခငျြလာတဲ့အခာ ငါအိပျပါတယျ တဲ့.. ။
ဟငျ…ဒါဟာ သူတျောစငျတဈယောကျရဲ့ ကငျြ့စဉျလား . သူမှ လုပျနိုငျတာကနြတောပဲ . ငါလညျးအဲလိုပါပဲလို့ တှေးလိမျ့မယျ။ မဟုတျပါဘူး။ သတိထားကွညျ့ပါနျော။
တဈနတေ့ဈနေ့ ဗိုကျမဆာပဲ စားနတေဲ့အကွိမျ ဘယျနှကွိမျရှိလဲ? ရမေငတျပဲ ရရေောတခွားဟာတှရေော သောကျနတော ဘယျနှကွိမျရှိလဲ . မအိပျခငျြပဲနဲ့ သှားလှဲအိပျနတောရော ဘယျလောကျမြားလဲလို့ ။
အဲဒီအခါကမြှ သိလိမျ့မယျ။ ဉာဏျပညာကွီးတဲ့သူတှဟော ဘာလို့ သူတို့ ဉာဏျပညာကွီးကွတာလဲ ဆိုတာနျော။ အဲဒီတော့ ဗိုကျဆာတာကို fight ရမှာလား။ မဟုတျပါဘူး။ Don’t fight your hunger. နျော။ ကိုယျ ဗိုကျဆာတာကို လေးလေးစားစား သဘောထားပါ။
အရငျဆုံး ဗိုကျဆာသလိုလို ဖွဈလာရငျ အစားတနျးမစားပါနဲ့ ရတေဈခှကျဝဝ သောကျပါ။ တဈခါတလေ ဗိုကျဆာတာမဟုတျဘူး ရငေတျနတော။ ရငေတျတာနဲ့ ဗိုကျဆာတာကို brain က signal မှား ရတတျတယျ။
ရသေောကျပွီးရငျ သတိထားကွညျ့ နလေို့ အရမျးကောငျးသှားတယျ။ တျောတျောနဲ့ ဗိုကျမဆာတော့ဘူး။ နောကျတဈခေါကျ ဗိုကျဆာရငျ နောကျတဈခါ ရအေဝသောကျကွညျ့၊ လူက ပေါ့ပါးပွီး စောစောကထကျ နလေို့ပိုကာငျးသှားပွနျတာ တှလေိ့မျ့မယျ။
သုံးခါလောကျ အဲလိုလုပျပွီးမှ အစားစားဖို့ လုပျပါနျော။ စားတော့မယျဆိုလညျး ဗိုကျဆာလို့ဆိုပွီး မသငျ့တာတှေ တဝတပွဲ စားပဈတာမြိုး မလုပျပါနဲ့။ တကယျ အာဟာရဖွဈမယျ့ အစားကို ဉာဏျနဲ့ ရှေးပါ။
ပါးစပျထဲရောကျ တနျး မွိုခပြဈတာမြိုး မလုပျပါနဲ့။ ကိုယျ့ရဲ့ အာရုံခံတှကေို အပွညျ့အဝ အသုံးခပြါ။ မကျြစိက သူ့ကိုမွငျရတဲ့အခါ ခံစားမှု ၊ နှာခေါငျးကရတဲ့ သူ့အနံ့၊ သူ့ကိုဝါးလိုကျတဲ့အခါ ခံတှငျးထဲမှာ သူကညြေကျသှားပုံလေး .. အားလုံးကို သတိလေးနဲ့ သိပွီး တဈလုပျခွငျး မြိုခပြါ။
ဗိုကျထဲအစားရောကျသှားတဲ့အခါ nutrious food ကို ရရငျ အစာအိမျက ပြျောတယျနျော။ သတိထားကွညျ့။ ခဏနတေော့ စားနရေငျးနဲ့ ဗိုကျဝတဲ့ခံစားမှု ရလာပွီ..။ အဲဒီအခါ ရပွီ တျောလောကျပွီ လို့ အစာအိမျက ပွောတယျနျော။ သူပွောတာကို နားထောငျပါ.. ။
အဲလို လုပျသှားရငျ တဖွေးဖွေး sensitive ဖွဈတာ အားကောငျးလာပွီးတော့ ကိုယျ့ခန်ဓာနဲ့ harmony ဖွဈအောငျ ညီညှတျအောငျ နတေတျတဲ့ အသိပညာ ဉာဏျပညာ တဖွေးဖွေး ဖွဈလာနတေယျဆိုတာ သိလာလိမျ့မယျ။
အဲဒီအခါ စိတျထဲမှာ ငါ ခုမှ Really Whole ဖွဈတယျပါလား.. ခုမှ ငါ့စိတျအာရုံရော ငါ့ခန်ဓာရော connection ရသှားတာပါလား.. ခုမှ စိတျနဲ့ခန်ဓာ တပေါငျးတစညျးတညျး ဖွဈတာပါလားလို့ သိသှားလိမျ့မယျ။
အဲလို ဖွဈလာပွီဆိုရငျ weight ခရြတာ အရမျးလှယျပွီ။ ကိုယျ့ခန်ဓာက ပွောလိမျ့မယျ ဘယျအခြိနျမှာ အစားစား၊ ဘယျအခြိနျမှာ ရသေောကျ ၊ ဘယျဟာစား ဘယျဟာမစားနဲ့ ၊ ရပျတော့ စသဖွငျ့နျော လုပျတတျလာလိမျ့မယျ။
ဘယျလောကျထိ ဝိတျခရြမလဲဆိုတာ ကိုယျ့ခန်ဓာကို မေးလို့ ရသှားပွီ။ ကိုယျ့အတှကျဆို ဘယျလောကျဝိတျဆို သငျ့ပါပွီ သူသိတယျ။ သူမြားတှကေ ကွညျ့ရငျ နညျးနညျး ဝသေးတယျ ဖွဈခငျြ ဖွဈနမေယျ ။
ဒါ သူတို့အကွိုကျလို့ ထားလိုကျပါနျော။ ကိုယျ့အတှကျ ကိုယျ့ခန်ဓာက ပွောတဲ့ perfect weight ကိုသာလိုကျနာဖို့ပဲ နျော။ ဗိုကျဆာတိုငျး မစားပါနဲ့။ ဗိုကျဆာရငျ ရသေောကျပါ။ ကိုယျ့ခန်ဓာနဲ့ connection ရအောငျလုပျပါ။
စိတျနဲ့ ခန်ဓာ connection ရသှားတဲ့ အတှအေ့ကွုံဟာ တခွား ကိုယျ့ဘဝရဲ့ အရေးကွီးတဲ့အရာမှနျသမြှအပျေါ ဘယျလောကျသကျရောကျမှု အားကွီးကွီးနဲ့ အကြိုးပွုမလဲ ဆိုတာ ကိုယျတှသေိ့ရပါလိမျ့မယျ။